Ramos oo fariin dareen leh u diray tababare Luis Enrique, kaddib markii uu ka tagay xulka qaranka Spain – Gool FM
(Spain) 20 Juunyo 2019. Kabtanka xulka qaranka Spain iyo kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa fariin dareen leh uu ku garab istaagayo u diray tababare Luis Enrique oo shalay isaga tagay shaqada tababarka ee xulka La Roja.
Kaddib markii uu kaga maqnaa xulka Spain bishii Maarso sababo shakhsi ah, Xiriirka Kubadda Cagta Spain ayaa xaqiijiyay Arbacadii shalay in Luis Enrique uu ka tagay shaqada tababarka ee xulka qaranka Spain si uu u daryeelo qoyskiisa.
Robert Moreno oo ahaa caawiyaha Luis Enrique ayuu Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee dalka Spain ee Luis Rubiales u magacaabay inuu yahay badalka Luis Enrique, kaddib war rasmi ah uu soo saaray.
“Waxaan go’aansanay in Robert Moreno uu noqdo badalka Luis Enrique ee xulka qaranka Spain”.
“Luis Enrique wuxuu go’aansaday inuu ka tago shaqada tababarka ee xulka qaranka Spain, waxaana sii wadi doonaa inaan ku qadarino shaqada uu ka qabtay La Roja”.
Hadaba Kabtanka xulka qaranka Spain iyo kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa bogiisa rasmiga ah ee Tuwitter-ka ku soo qoray fariin uu ku garab istaagayo tababare Luis Enrique wuxuuna yiri:
“Guul kasta uu gaaro xulka qaranka Spain waa guushaada, dhamaanteen waan ku taageeri doonaa waana ku garab istaagi doonaa”.
Yeelkadeeda, macalinka cusub ee xulka qaranka Spain Robert Moreno oo guul soo gaarsiiyay 3-dii kulan ee lasoo dhaafay ay la ciyaareen xulalka Malta, Faroe Islands iyo Sweden, inta uu maqnaa Luis Enrique, ayaa wuxuu noqonaya macalinka 56-aad ee taariikhda xulka Spain.
Xulka qaranka Argentina oo barbaro la dhaafi waayay Paraguay kulan ka tirsanaa tartanka Copa America 2019.... SAWIRRO